Macdanta Boqorka Suleymaan (qeybta 17), Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Minesaska King Solomon ee 17
Waa maxay mawduuca, ujeeddadu iyo fikradda guud ee buugga "Sprüche"? Waa maxay wadnaha jidkeenna Eebbe ee naloogu muujiyey kitaabkan?
Waa ka cabsashada Rabbiga. Haddii aad ku soo koobi lahayd Buugga Maahmaahyada oo dhan hal aayad, midkee ayey noqon laheyd? Rabbiga ka cabsashadiisu waa bilowga aqoonta. Nacasku nacasnimadiisa iyo edbinta way quudhsadaan. (Maahmaahyadii 1,7) , Maahmaahyadii 9,10 waxay sheegaysaa wax la mid ah: "Xigmadda bilowgeeda waa ka cabsashada Rabbiga, iyo inaad ogaato Kan Quduuska ah sababtu."
Cabsida Rabbiga waa runta ugu fudud ee Maahmaahyada.
Hadaannan Rabbiga ka cabsan, oo haddaba annagu ma heli doonno xigmad, iyo waxgarasho, iyo aqoon, Waa maxay cabsida Rabbiga? Waxay u egtahay mid kasoo horjeedda. Dhanka kale, Ilaah waa jacayl dhanka kale, waxaa naloogu yeedhay inaan ka cabsanno. Taas macnaheedu ma in Ilaah cabsi, cabsi iyo cabsi? Sideen xidhiidh ula yeelan karaa qof aan ka baqayo?
Cibaadada, ixtiraamka iyo yaabka
Safka ugu horreeya ee Maahmaahyada 1,7 waa wax yar oo ay adag tahay in la fahmo, waayo waa kan fikirka "Ha baqina" qasab ma aha in maskaxda lagu hayo markaan ka fikirno Ilaah. Ereyga la tarjumay "cabsi", oo u muuqda tarjumaaddo badan oo Baybalka ah, waxay ka timid erayga Cibraaniga "yirah". Ereygan wuxuu leeyahay macno badan. Mararka qaarkood waxay ka dhigan tahay cabsida aan dareemeyno markaan wajaheyno qatar weyn iyo / ama xanuun, laakiin waxay sidoo kale macnaheedu noqon kartaa "xurmo" iyo "cabsi". Farsamooyinkan noocee ah ayaan u adeegsanaynaa aayadda 7aad? Macnaha guud halkan waa muhiim. Micnaha "cabsi" ee kiiskeenna waxaa lagu sharaxay qaybta labaad ee aayadda: nacasku waxay quudhsadaan xigmadda iyo edbinta. Ereyga furaha halkan waa in la quudhsado, taas oo waliba macnaheedu noqon karo inaad tixgeliso qof aan qiimo lahayn ama quudhsaday isaga. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu qeexo qof madax adag, kibirsan oo muran badan oo aaminsan inuu had iyo jeer sax yahay (Maahmaahyadii 14,3; 12,15).
Raymond Ortl oo ku qoray buuggiisa Maahmaahda: “Waa eray neceb xun iyo meel ka dhac ku saabsan cilaaqaadyada. Waa kibirka aad u maleynaysid inaad ka sarayso dhexdhexaad isla markaana aad u xariif badan, aadna u wanaagsan oo aad ugu mashquulsan cibaadada iyo baqdinta. ”
CS Lewis wuxuu sharraxayaa aragtida noocaas ah buugiisa Pardon, waxaan ahay Masiixi kaamil ah: “Sideed ula kulantaa qof kaa sarreeya dhinac kasta? Haddaadan wax garan, oo aadan garanayn sida tan oo kale oo aad garanaysid oo naftaada u garanaysid sidii wax diidmo ah oo aadan garanaynin ilaahay. In alla intaad kibray, Ilaah ma ogaan kartid. Qofka kibirka leh had iyo jeer wuxuu hoos u fiiriyaa dadka iyo waxyaabaha isla markaana intaad hoos u fiiriso ma arki kartid waxa iyaga ka sarreeya.
"Ka cabsashada Rabbiga" micnaheedu waa cabsi cabsi gelin xagga Rabbiga ah, sida haddii Ilaah yahay nin xanaaq badan. Cibaadada macnaheedu waa xushmad iyo sharaf qof. Ereyga "naxdin" waa fikir ay adagtahay in lagu garto maanta, laakiin waa eray kitaab leh oo cajiib ah. Waxaa ka mid ah fikradaha la yaabka, yaabka, qarsoodiga, la yaabka, mahadnaqa, qadarinta iyo xitaa soo-jiidashada. Waxay ka dhigan tahay hadal la'aan. Qaabka aad u falceliso marka aad la kulanto ama aad la kulanto wax aadan weligaa hore u soo arag oo isla markiiba ereyo gelin karin.
Waxay i xusuusineysaa dareenka aan dareemay markii ugu horreysay ee aan arko 'Grand Canyon'. Ma jiro wax sheegi kara dareenkan qadarinta leh ee aan dareemay markii aan arkay quruxda weyn ee Eebbe iyo abuurkiisa hortayda ah. Jahawareerku waa mid weyn. Ujeeddooyinka sida qurxoon, dhiirrigelinta, xad-dhaafka ah, xiisaha leh, xiisaha u qaadashada, xiisaha u lihi waxay sharxi kartaa heerarkan buuraleyda ah. Erayo la'aan baan ahaa markii aan kor ka fiiriyey webiga weyn, kaasoo in ka badan kiiloomitir iga hooseeya. Quruxda iyo midabada muuqda ee dhagaxyada iyo noocyada kaladuwan ee flora iyo fauna - waxaas oo dhami waxay noqdeen kuwa hadal la'aan ah. Qayb ka mid ah Grand Canyon majirto mar labaad. Midabkiisii, oo isku beddelay isla markaana murugsanaa hal daqiiqad, ayaa isbadal ku yimi qaabkoodii qorrax dhaca. Waligey ma arkin wax la mid ah. Isla mar ahaantaana waxay iga dhigtay cabsi yar sababtoo ah waxaan dareemay inaan aad u yarahay oo aan qiimo lahayn.
Taasi waa nooca yaabka leh ee erayga naxdinta leh uu ku jiro. Laakiin layaabkan maahan mid keliya oo ka timid abuuritaanka Eebbe, laakiin wuxuu sidoo kale tilmaamaa kan ah kan kaamilka ah iyo si kasta oo u gaar ah oo xad dhaaf ah. Taasi waxay had iyo jeer ahayd mid qumman, hadda kaamil ah weligeedna way fiicnaan doontaa. Waxkasta oo ku saabsan Ilaah waa inay u beddelaan fikirradeenna mid yaab iyo xushmeyn oo kiciyaan xushmad buuxda. Nimco iyo naxariis iyo jacaylkiisa shuruud la’aanta ah ee aan nooga filnayn, ayaa naloogu soo dhoweeyay masaakiinta iyo qalbiga Ilaah. Waa wax cajiib ah, Ciise wuu is-hoosaysiiyey annaga aawadeen oo xitaa wuu inoo dhintay. Isagu wuu samayn lahaa haddii aad tahay qofka keliya ee adduunka. Isagu waa badbaadiyahaaga. Isagu wuu ku jecel yahay ma aha oo kaliya inaad tahay halkaan adduunka, laakiin waxaad halkan u joogtaa adduunka maxaa yeelay wuxuu kuu keenay dunidan oo uu ku jecel yahay. Dhammaan wax kasta oo Eebbe abuuray waa cajiib, laakiin waxaad ku sugan tahay bartamaha qoraallada sida, sida Sabuurka 8, ay uga hadlayaan Saddexmidnimada Eebbe. Annagu hadaan nahay daciif, dad jilicsan ayaa ku jawaabi kara oo keliya "Wow!"
Waxaan arkay Sayidkii
Augustine wuxuu ahaa caalim fiqi ah oo Masiixiyiin ah oo wax badan ka qoray wax yaabaha cajiibka ah ee Eebbe. Mid ka mid ah shaqooyinkiisa ugu muhiimsan waxaa lagu magacaabaa "De Civitate Dei" (Jarmalku wuxuu ka yimid gobolka Ilaah). Markuu dhintey sida asxaabtiisi ugu dhawaa waxay ku soo urureen agagaarkiisa, dareen mucjiso ah oo nabadeed ayaa qolka buuxsamay. Isla markiiba indhihiisii ​​waxay u fureen kuwii qolka joogay wuuna iftiimay isagoo muujinaya iftiinkaya inuu arkay Sayidkii oo waxkasta oo uu qoro ma xukumi karaan. Kadib wuxuu si nabad ah u seexday, Maahmaahyadii 1,7: 9,10 iyo ka hadal, cabsida Rabbiga waa bilowga aqoonta iyo xigmadda. Tan macnaheedu waa aqoonta iyo xikmadda ayaa kaliya lagu salayn karaa cabsida Rabbiga oo la’aanteed ma jiri karto. Waa shuruudihii looga baahnaa si aan nolol maalmeedkayaga wax uga qaban karno. Rabbiga ka cabsashadiisu waa bilowga: Rabbiga ka cabsashadiisu waa il nololeed, Si laga fogaado xadhkaha dhimashada. (Spr14,27) , Haddii aad u qadariso oo aad ixtiraamto Ilaah waxa uu yahay, aqoontaada iyo xigmaddaadu wey sii koreysaa. Adiga oo aan ka cabsanayn Rabbiga ka cabsashadeena, waxaan nafteena ka reebbannaa hodantinkan xigmadda iyo aqoonta Eebbe. Rajada Baybalka ee All waxay tarjumaysaa aayadda 7 sidan: "Aqoonta oo dhan waxay ku bilaabataa cabsida Rabbiga."
Buugga carruurta ee 'The Wind in the Willows' oo uu qoray Kenneth Graham, jilayaasha ugu waaweyn - jiirka iyo bar - waxay raadinayaan ilmo yar oo ku dhaca oo ku dhaca Ilaah hortiisa.
Si kedis ah mooralku wuxuu dareemay cabsi weyn oo murqaha u rogay biyo, madaxiisa u sujuudaya oo cagaha ku ruqaya dhulka. Si kastaba ha noqotee, ma uusan argagaxin, waxay dareemeysay nabad iyo farxad. "Rat", wuxuu haystay hawada mar labaad inuu cod ku qaylinayo wuxuuna weydiiyay gariir, "miyaad baqaysaa?" "Cabsii?" Raajiciyay Rat, indhaha waxaa ka buuxsamay jacayl aan la sheegi karin. "Ha baqina! Hortiisa? Marna, waligaa! Hadana… oh mooti, ​​waan baqay! ”Markaas labada xayawaan madaxa bay u sujuudeen oo tukadeen.
Haddii aad sidoo kale rabtid inaad ku soo aragtid Ilaahay is-hoosaysiintaan oo aad u argagax badan, markaa warka wanaagsan waa kan aad awoodid. Laakiin ha isku deyin inaad adigu tan sameyso. Weydiiso Ilaah inuu cabsigani kugu dhex geliyo (Phil2,12-13). U soo ducee maalin kasta. Ka fikir mucjisooyinka Ilaah. Eebbe iyo abuurkiisuba waa mucjiso. Cabsida Rabbiga ayaa ah falcelinteena markaynu ogaanno cidda runtii Eebbe yahay iyo markaan aragno farqiga weyn ee u dhexeeya nafteena iyo Ilaah. Wuxuu kaa tegi doonaa hadlaa.